Shiinaha gogol xaashida acrylic jaban soosaarayaasha dusha sare iyo alaabada | Gokai
Guddiga xumbo ee PVC
PVC xumbada xumbada
guddiga xumbo PCV celuka
Guddiga xumbo CO-Extruded
Guddiga xumbo WPC
midabka guddiga PVC
warqad acrylic cad
dahaadh xaashida looxa
sheet muraayad looxa
xaashi acrylic cad
go'yaal akrilik midab leh
xaashi acrylic frosted
xaashida looxa loo yaqaan 'acrylic sheet'
warqad akrilik dhalaalaya
gogol xaashida acrylic raqiis ah
Waraaqaha balaastigga ah ee WPC sintra
bunning xaashida looxa
warqad acrylic light diffuser
xaashida acrylic saafi ah
xaashida muraayadda looxa
warqad muraayad akrilik qalin ah
1mm PVC xaashida xumbada bilaashka ah
15mm Xaashida Forex
warqad xumbo PVC midab leh
cufnaanta sare ee waraaqaha foamex CO-laga soo saaray
Ballanqaadka Tayada Iyadoo 10 sano oo khibrad ah u leh daabacaadda iyo dhoofinta, waxaan si fiican u fahannay waxa ay macaamiisheennu raadinayaan. Tayada ayaa ah waxa ugu horeeya ganacsigeena. Macno malahan amar yar ama shaqo weyn, waxaan ilaalineynaa isla nidaamka xakamaynta tayada. Waxaan haynaa 4 shaqaale QC ah oo hubiya tayada dalab kasta kahor inta aan la rarin.
Faahfaahinta wax soo saarka
Cufnaanta 1.2g / cm3
Dhumucdiisuna 1.8mm, 2mm, 2.5mm, 2.8mm, 3mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm ...... ilaa 50mm
Midab Midab kastaa waa caadi, sida mid saafi ah, qabow, midab madoow, caddaan, casaan, buluug, madow, madow iyo caddaan, habeen iyo habeen, muraayad, iwm. Waxaan sidoo kale sameyn karnaa
midab gaar ah oo ku saleysan shuruudahaaga gaarka ah.
Waxyaabaha 100% bikrad ah Mitsubishi walxo cayriin
Tayada Xaashidayada looxa ee looxa waxay u dhigantaa shahaadooyinka CE / SGS
MOQ 2 tan ama hal santuuq alwaax ah
630kg / cm2
760kg / cm2
1260kg / cm2
1050kg / cm2
Tusmo Refractive Index
Heerkulka Kala-soocnaanta Kuleylka
Heerkulka sameysma kuleylka
140 ℃ -180 ℃
Isugeynta balaadhinta kuleylka toosan
6 * 10-5cm / cm / ℃
Biyaha (24HRS) Nuugista
1. dhismaha: daaqadaha, daaqadaha iyo albaabada aan codka lahayn, maaskaro qodista, waababka telefoonka, iwm.
2.ad: sanaadiiqda nalka, calaamadaha, calaamadaha, bandhigga, iwm.
3. gaadiidka: tareenada, gawaarida iyo gawaarida kale, albaabada iyo daaqadaha
4. Caafimaad: kuleyliyeyaasha ilmaha, qalab caafimaad oo kala duwan oo qalliin
5. alaabta dadweynaha: tas-hiilaadka fayadhowrka, farsamada gacanta, qurxinta, jir, haanta, iwm
Saxanka xajmiga loo yaqaan 'Extracted acrylic plate 4ft x 8ft acrylic sheet'
(Maahan goynta heerkulka sare iyo mashiinnada leysarka)
Gudbinta iftiinka wanaagsan. cas midab leh
Caabbinta cimilada 2.Good midab xaashi ah oo loo yaqaan 'plexiglass sheet'
3.Can waa la caabudi karaa oo dib loo soo celin karaa.
4.Widely isticmaalka, fududahay in la dheeho iyo rinjiyeynta.
5.Sun la'aan. midab xaashi ah oo loo yaqaan 'plexiglass sheet'
6.High farsamo sare.
7.Light miisaan. midab xaashi ah oo loo yaqaan 'plexiglass sheet'
8.Wax saameyn xoog leh. warqad jilicsan oo jilicsan oo jilicsan
9.Good Qalabka Daaweynta, si ballaaran loogu isticmaalo qalabka korantada ee kala duwan.
10.Good daahan adag iyo xoqida iska caabin ah
11.Iska caabinta kiimikaad ee wanaagsan, kana sareysa inta badan qalabka kale ee balaastigga ah.
12.Fudud in la nadiifiyo oo la ilaaliyo.
1.Gudbinta Tayada Iyadoo khibrad 10 sano ah u leh daabacaadda iyo dhoofinta, waxaan si fiican u fahannay waxa ay macaamiisheennu raadinayaan. Tayada ayaa ah waxa ugu horeeya ganacsigeena. Macno malahan amar yar ama shaqo weyn, waxaan ilaalineynaa isla nidaamka xakamaynta tayada. Waxaan haynaa 4 shaqaale QC ah oo hubiya tayada dalab kasta kahor inta aan la rarin.
2.Qiim tartan ah Waxaan ku garaaci karnaa qiime kasta 10% ka yar. Waxaan marwalba lashaqeynaa macaamiisheenna si aan gacan uga geysano guuleysiga ganacsi dheeri ah oo leh qiime dhab ah. Maaddaama aan raadineyno wada-hawlgalayaal ganacsi oo muddo dheer ah, maahan oo keliya hal shaqo oo keliya.
Soo Gudbinta Degdega ah Macaamiil kasta wuxuu mudan yahay adeeg hufan. Waxaan ka shaqeyneynaa 24 saacadood oo aan la shaqeyneyno 3 wareeg, daabacaad kasta gudaheeda 1000 mitir murabac, waxaan u diri karnaa 3 maalmood gudahood Tiro aad u tiro badan, waxaan had iyo jeer u bixinnaa si ka dhakhso badan tan macaamiishayada '.
Q1: Mudo intee le'eg ayaa loogu talagalay waqtiga wax soo saarka?
J: Waa qiyaastii 20 maalmood markaan helno deebaajiga.
Q2: Sideed u xakameysaa tayada?
J: Waxaan leenahay kooxda QC waxay u hogaansamaan TQM, talaabo kasta waxay u hogaansaneysaa heerarka Isla waqtigaas, waxay kaa qaadi doonaan sawiro waxayna kuu duubi doonaan fiidiyow.
Q3: Sidee loo xalliyaa dhibaatooyinka tayada kadib iibka?
J: Ka qaad sawiro dhibaatooyinka oo noo soo dir Ka dib markaan xaqiijino dhibaatooyinka, seddex maalmood gudahood, waxaan kuu sameyn doonaa xal lagu qanco.
Q4: Sidee loo xaqiijiyaa tayada nala inta aannaan bilaabin soo saarista?
J: 1) Waxaan ku soo bandhigi karnaa shaybaarro waxaadna dooran kartaa mid ama in ka badan, ka dibna waxaan ku sameyneynaa tayada taas.
2) Noo soo dir shaybaarkaaga, oo waxaan u sameyn doonnaa si waafaqsan tayadaada.
Hore: xaashi acrylic frosted
Xiga: warqad akrilik dhalaalaya
xaashida looxa 2mm
xaashi acrylic cad cad
xaashi akrilik ah oo hufan
xaashida muraayadda loo yaqaan 'acrylic mirror' 4 × 8
xaashi cad oo caanah ah
go'yaal akrilik aquarium
Telefoonka: +86 -21 -56561003
Qolka 1003, Dhismaha 1, Lane 111, Wadada Luxiang, Degmada Baoshan, SHANGHAI, Shiinaha
Xaashida caaga WPC Sintra
Waxaan ku soo laabanay shaqadii fasaxii CNY kadib
Suuqa Xaashida Xumbo PVC: Hordhac
Waan wada joognaa